हँसिलो अनुहारकी उनी साझा यातायातकी महिला बस चालक हर्मिता श्रेष्ठ - Nepal Insider
Home/समाचार/हँसिलो अनुहारकी उनी साझा यातायातकी महिला बस चालक हर्मिता श्रेष्ठ
काठमाडौँ– नाडीमा हरियो–पहेँलो रंगका चुरा। हत्केला ढाकिने गरी लगाएको मेहन्दीको रंग। त्यही चुरा र मेहन्दीले सजिएका हातले गाडीको स्टेरिङ घुमाउँदै थिइन्। हँसिलो अनुहारकी उनी साझा यातायातकी चालक हर्मिता श्रेष्ठ हुन्।
उनको जन्म २०३५ सालमा धरानको भानुचोकस्थित भएको हो। उनका बुवाआमा खेती किसानी गर्थे। परिवारमा ६ दाजुभाइ र ५ दिदिबहिनी। उनी साइँली छोरी।
परिवार ठूलो भएका कारण घरायसी समस्या आइरहन्थे। विद्यालय जान्थिन्, फुर्सदको समयमा बुवाआमालाई काममा सहयोग गर्थिन्। उनले कक्षा १० सम्म पढेकी छन्।
धेरै पढेर डाक्टर या इन्जिनियर बन्ने त्यस्तो कुनै चाहना थिएन। तर ठूलो भएपछि चालक बन्ने रहर भने थियो।
कसरी चालक बन्ने सोच पलायो भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘हाम्रो घरमा मारुती भ्यान थियो। ड्राइभरले त्यो चलाएको देख्दा आफूलाई पनि चलाउने रहर लाग्थ्यो।’
१३ वर्षको उमेरदेखि नै उनले भ्यान चलाउन सिकेकी हुन्। भ्यान चलाउन सिकेपछि भ्यान बाहिर पनि लाने गर्थिन्। यसले गर्दा उनमा रहेको चालक बन्न इच्छा थप बढ्दै गयो।
सबैले भविष्यमा केही न केही बन्ने सोच बनाएका हुन्छन्। हर्मिताले चालक बन्ने सोच बनाएकी थिइन्। उनी भन्छिन्, ‘गाउँमा बस चढ्दा कसरी बस चलाएको होला, मैले पनि यसरी नै बस चलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्थेँ।’
झण्डै २४ वर्ष अघि उनी काठमाडौँ घुम्न भनेर छिरेकी थिइन्। राजधानीमा उनी आफन्तकोमा बसिन्।
काठमाडौँ बसेको एक वर्ष भएको थियो, उनको विवाह भयो। विवाहपछि उनी श्रीमानसँग सिन्धुपाल्चोक गइन्। केही समय त्यहाँ बसेर उनी पुनः श्रीमानसँगै काठमाडौँ पसिन्।
विवाहपछि पारिवारिक जिम्मेवारी बढ्दै जान्छन्। श्रीमान एक्लैको कमाइले मात्र नपुगेपछि उनी पनि कामको खोजीमा लागिन्। उनले भनिन्, ‘जीवन चलाउन न केही त गर्नु पर्‍यो नि।’
जागिर खोज्ने सिलसिला जारी नै थियो। यति समयसम्म उनी एक सन्तानकी आमा बनिसकेकी थिइन्। उनले हनुमानढोकामा सिलाइबुनाइको काम सिकिन्। उनले कम ज्याला भएकाले कामलाई निरन्तरता भने दिन सकिनन्।
‘मेहनत बढी आम्दानी कम हुने के गर्नु। यही काम पुरुष पनि गर्छन् तर ज्याला हामी भन्दा धेरै पाउँछन्। काम एउटै तर ज्याला फरक। त्यसै माथि महिलालाई गर्ने व्यवहार पनि।’ यस्तो प्रवृत्तिले सिलाइबुनाइको काम छोडेको उनले सुनाइन्।
ज्ञानेन्द्र शाहीको नाम र सर्टिफिकेट दुवै नक्कली !
०७६ वैशाख १९ गते बिहिवार ई. सं. २०१९ मे ०२ तारिख, हेर्नुहोस राशि अनुसार तपाईंको भाग्य